faly izahay ny momba ny liana amin’ny kintana. Indrisy anefa fa, ny Browser dia antitra loatra ny toerana. Azafady mampiasa ny Dikan-vaovao ny Internet Explorer na ny hafa Navigateur toy ny Firefox, na Chrome.
Tototry ny fahantrana manodidina azy, nanomboka ny Indiana tailors mba hanampy Kuka Arora. Kely voalohany, ary avy eo amin’ny zava-drehetra nananany. Kuka Arora amin’ny ankizy avy any izy no nanorina ny ‘Masoandro Tetikasa’, ny ankizy eny an-dalambe ao amin’ny tanàn-dehibe Delhi manome fahafahana mitsidika ny sekoly. Ny efitrano izay ny cutter Kuka Arora mandray ny mpanjifa, tsy misy varavarankely. Na iza na iza tonga eto, ao am-po ny tanàn-dehibe ao Delhi, noho ny mety, dia tsy maintsy aloha, amin’ny alalan’ny tena malalaka efitra fisakafoana. Amin’ny mitatao vovonana dia afaka mandre avy amin’ny tsy misy, mamirapiratra voices. ‘Ah, ny ankizy avy an-trano any an-tsekoly,’ hoy Arora. Kuka Arora fiainantsika ny fiainana miavaka Indiana afovoany-kilasy toy ny tena-miasa. Ny vadiny, Parity tanàna mpitari-dalana. Dia mandeha avy amin’ny namana any amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena. Ny fianakaviana dia ny ho ara-bola tena tsara dia tsy noho ny ankizy. Fenoy ny manontolo efitra fisakafoana. Ary ao amin’ny varavarana misokatra ho amin’ny tohatra bebe kokoa ny mandalo ny rian-drano: ny zanak Atoa tompon’ny maro, Arora fanaka ho tampon-trano. Eto, ihany koa, ny latabatra dia izao roa sy telo variana. Aroras tailoring dia vitsy ny mpiasa. Izany dia hita ao amin’ny iray amin’ireo tsotra faritra Delhi. Eny ambany tanàna, ary-ny kilasy afovoany ny Trano, dia mifamatotra akaiky. Eo anoloana izany fofona toy ny kely setroka fiara, ao ny tokotany, ho amin ny fahoriana. Mba andefaso: IBAN DE BIC DEUTDEHH mots-clés ‘ny Masoandro Tetikasa’. Fototra kintana rehetra, nanomboka ny taona. Nisy zazavavy kely iray izay lavo Arora, ny ankavia dia tsy hita. Ny kely Rosini dia angamba roa taona, dia vinavina. Ao mitalaho eo anoloan’ny cinema ny manodidina. Izy sy ny vadiny nanomboka mitondra tsy tapaka zavatra hohanina. Mba ho afaka Kuka Arora amin’ny vadiny, Parity: bebe kokoa ny ankizy eny an-dalambe, dia izay voaisy fipetrahana ny roa amin’ny tampon-tranony Fa indray andro izy dia lasa. Kuka, Parity, ary nahita anao manaraka be arabe, efa naniraka misy satria nisy bebe kokoa mangataka. Ny Aroras nanao Hiatrehana ny tsy manan-kialofana ny ray aman-dreny: ireo mandray karama Rosini fanabeazana, fikarakarana ara-pahasalamana sy ny sakafo. Ny ray aman-dreny handefa anareo any an-tsekoly. ‘Rehefa afaka andro vitsivitsy, bebe kokoa ny ankizy eny an-dalambe, izay nandre ny Rosini tonga,’ hoy Arora.
‘Ary nisy foana kokoa
Ny ankizy tonga ny fiafaran ny loharanom-bola, fa ny Aroras natao. Ny fanampiana dia tonga amin’ny alalan’ny ny zavatra mpanamory fiaramanidina iray Julia Hillebrecht, ny niantsona tsapaka ao Aroras tailoring. Nanomboka tamin’izay, dia ny fanangonana fanomezana ho an ‘ny Masoandro ny Tetikasa’, ary nandamina fiahiana. Efa misy ireo ‘Masoandro’-ny ankizy miasa ho toy ny mpampianatra, Dokotera na ny mpitantana sy manampy ny Taranaka manaraka ny ankizy. Kuka Arora te-hanohy: ‘Izahay mbola hahita ankizy eny an-dalambe, tsy mahalala firy taona ianao na ahoana ianao mafana’, hoy izy. ‘Tiako fotsiny ianao mba hanana sambatra ny Fahazazany. Koa tany an-toerana, ny Mofomamy no ampiasaina. Afaka mandrefy toerana ny fampiasana ny mampiasa matoan-dahatsoratra content sy ny dokam-barotra ara-view. Izany no zava-dehibe ho antsika, satria ny manolotra vola amin’ny alalan’ny dokam-barotra. Ny fampiasana ny tranonkala, ianao manaiky Mofomamy fampiasana.
For more info sy ny safidy
← Video Mampiaraka Cheetal, India, Mangalore, te-hihaona amin'ny lehilahy age - taona